जन्मदै दुवै आँखा नभएका रमेश प्रसाईको यस्तो छ जिवन कहानी, आमा भन्छिन्, ‘छिमेकीले नै वि’ष खुवाएर मारिदेउ भन्थे’ (भिडियो हेर्नुस्) – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. जन्मदै दुवै आँखा नभएका रमेश प्रसाईको यस्तो छ जिवन कहानी, आमा भन्छिन्, ‘छिमेकीले नै वि’ष खुवाएर मारिदेउ भन्थे’ (भिडियो हेर्नुस्) – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
रमेश प्रसाई ताप्लेजुंगमा २०५० सालमा भएको हो । उनका बुवा आमा शिक्षण पेशामा संलग्न छन् । त्यसैले उनी साथैदेखि चेतनशिल थिए । दुवै आँखा नभएका उनी जन्मजात नै यस्तै हुन् । उनी सामाजिक विषयमा बोल्छन्, सामाजिक सञ्जालमा पनि निकै सकृय छन् ।
दृष्टिविहिनहरुका लागि उपयुक्त हुने विभिन्न कृयाकलाप गराउने भएकाले अन्य कृयाकलापमा पनि उनी सकृय थिए । उनले २०६९ सालमा एसएलसी दिएर पहिलो श्रेणिमा पास गरे । पहिलो पटक भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा उनले पहिलो पटक सामाजिक सञ्जाल फेसवुकमा लाइभमा आएर दिएको अभिब्यक्ति पछि चर्चित भएका थिए । २०७५ साल बैशाखमा नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा उनले त्यसवारे बोलेका थिए । सामाजिक सञ्जालमा उनले निकै खरो भनाई सार्वजनिक गरेका थिए । त्यो भनाई निकै चर्चित भयो ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको December 16, 2020 December 17, 2020 427 Viewed